Rajesh Koirala » Reference Materials
२०७४ को जगदम्बा भित्तेपात्रो (2074 Jagadamba Calendar) पाउन यहाँ क्लिक गर्नुहोस्-
२०७३ को जगदम्बा भित्तेपात्रो (2073 Jagadamba Calendar)
२०७३ को जगदम्बा भित्तेपात्रो (2073 Jagadamba Calendar) पाउन यहाँ क्लिक गर्नुहोस्-
एन्ड्रोइड फोनमा कसरी नेपाली लेख्ने बनाउने ? (How to make an Android phone write Nepali?)
तपाईंको फोन गुगलको एन्ड्रोइडबाट चलेको छ भने गुगल प्लेमा जाने । यहाँ यसको लोगो छः
२०७२ सालको जगदम्बा पात्रो
२०७२ सालका सार्वजनिक बिदा र पर्वहरू
नेपाल सरकारले विक्रम संवत् २०७२ साल वैशाख १ देखि २०७२ साल चैत्र मसान्तसम्म एक वर्षभरिमा सबै सरकारी कार्यालयहरूलाई तोकेका सार्वजनिक, पर्व एवं सट्टा बिदा र कार्यालय समय यस पिडिएफ फायलमा छन् । तल (2072 Bida Nepal मा) क्लिक गर्नुहोला ।
2072 Bida Nepal
आइफोन / आइपोडमा कसरी नेपाली लेख्न सक्ने बनाउने ? (How to make iPhone / iPod to write Nepali ?)
आइफोन / आइपोडमा नेपाली लेख्न टाइप नेपाली (Type Nepali), टाइप नेपाली बाई नेपालयज (Type Nepali by Nepalayas), नेपाली टाइप (एबीसीटुकखग) (Nepali Type (abc2kakhaga)), नेपाली डायरी (Nepali Diary) आदि नामका एप्सहरू पाइन्छ । यी सजिला छन् । कुनै पैसा तिर्नुपर्ने त कुनै सित्तैमा पाइन्छन् ।
तर यी एप्सहरू नभए पनि यसैमा भएको प्रविधिको सहयोगमा देवनागरीमा लेख्न सक्ने बनाउन सकिन्छ । आइफोन / आइपोड बनाउँदा हिन्दी भाषा समावेश गरिएको छ । नेपाली छैन । त्यसैले हिन्दीकै आधारमा नेपाली लेख्न सकिन्छ । युनिकोड नेपाली टाइप गर्न सक्नेले यसलाई सजिलै सिक्नुहुनेछ । Read More »
२०७१ को जगदम्बा क्यालेन्डर
२०७१ सालको भित्तेपात्रो पाउन यहाँ क्लिक गरौं
To get Nepali calendar of 2071, click here.
२०७१ सालका चाड-पर्व र बिदा कहिले-कहिले ?
नेपाल सरकारले २०७१ वैशाख १ देखि २०७१ चैत्र मसान्तसम्म वर्ष भरमा सबै सरकारी कार्यालयलाई देहायबमोजिमको सार्वजनिक, पर्व एवं सट्टा विदा र कार्यालय समय निर्धारण गर्ने निर्णय गरेको छ ।